ဟာလန်း နဲ့ သင့်တော်တဲ့ ကလပ် ၊ ယူနိုက်တက် ကို လာလည်မယ့် လက်ဝှေ့အကျော်မော် ၊ ရာမိုစ့် ရဲ့ အနာဂါတ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်းအားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ဟာလန်း နဲ့ သင့်တော်တဲ့ ကလပ် ၊ ယူနိုက်တက် ကို လာလည်မယ့် လက်ဝှေ့အကျော်မော် ၊ ရာမိုစ့် ရဲ့ အနာဂါတ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်းအားကစား သတင်းများ
ယမန်နေ့ ညက ကစားသွား ခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ ပုံစံကောင်းတွေ တောက်လျောက် ပြသ နေတဲ့ ဝက်စ်ဟမ်း အသင်းဟာ အိမ်ကွင်းမှာ လီဗာပူး အသင်းကို ၃-၂ နဲ့ အနိုင် ကစားသွားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါဟာ လီဗာပူး အတွက် ဒီနှစ် ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ပထမဆုံး ရှုံးပွဲ ဖြစ်လာ စေခဲ့ပြီး ဝက်စ်ဟမ်း ကတော့ လီဗာပူး ကို ကျော်တက်ကာ အဆင့် ၃ နေရာအထိ တက်လှမ်း သွားနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် ကလည်း ဝက်ဖိုဒ့် အသင်းကို ၁-၀ နဲ့ အနိုင် ကစားပြီး နောက်ဆုံး ၁၀ ပွဲ ဆက်တိုက် ရှုံးပွဲ မရှိအောင် ကစားလာ နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
အီတလီ စီးရီးအေ မှာတော့ အေစီ နဲ့ အင်တာ တို့ရဲ့ မီလန်ဒါဘီ ဟာ တဘက် ၁ ဂိုးစီ သရေရလဒ် ထွက်ပေါ် ခဲ့ ပါတယ် ။ ဇယားထိပ် က နာပိုလီ ကလည်း အိမ်ကွင်းမှာ သရေ ရလဒ် ထွက်ပေါ် ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
စပိန် လာလီဂါ မှာတော့ ချန်ပီယံ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် ဟာ အဝေးကွင်းမှာ ဗလင်စီယာ အသင်း ကို ၃-၁ နဲ့ ဦးဆောင် ထားနိုင်ပြီးကာမှ မိနစ် ၉၀ ကျော်မှာ ၂ ဂိုး ပြန်ပေး ခဲ့ရပြီး သရေ ရလဒ် နဲ့ ပြီးဆုံး သွားခဲ့ရ ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲမှာ အေတီကို နောက်ခံလူ ကီရန် ထရစ်ပီယာ ဟာ ပုခုံး ဒဏ်ရာ ရရှိ ခဲ့ပြီး ဆေးရုံကို သွားရောက် ကုသ ရတဲ့ အထိ ပြင်းထန် ခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
PSG ခံစစ်မှူးကြီး ဆာဂျီယို ရာမိုစ့် ရဲ့ အေးဂျင့် လည်းဖြစ် ၊ အကိုလည်း ဖြစ်တဲ့ ရီနေး ကတော့ ရာမိုစ့် ဟာ ပြင်သစ် ကလပ် မှာ စတင် ကစားနိုင်ဖို့ မြန်နိုင်သမျှ မြန်အောင် လုပ်ဆောင် နေပြီး စာချုပ် ဖျက်သိမ်းမယ့် ကိစ္စ မရှိသလို အခြားကို သွားဖို့လည်း အစီအစဉ် လုံး၀ မရှိပါဘူးလို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘိုင်ယန် နဲ့ ဂျာမနီ ဂန္ထဝင် ကစားသမားကြီး လိုသာ မားသီးယပ်စ် က ဒေါ့မွန် တိုက်စစ်မှူးလေး အာလင်း ဟာလန်း ဟာ ရီးရဲ မက်ဒရစ် မှာ ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ ကစားသမား ဖြစ်လာ နိုင်ပြီး ဘာပေ နဲ့ အတူ တွဲဖက် ကစား နိုင်မည့်သူမျိုးလည်း ဖြစ်တယ်လို့ ညွှန်းဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဗြိတိန် လက်ဝှေ့ အကျော် အမော် တိုင်ဆန် ဖျူရီ ဟာ မန်ချက်စတာ ဒါဘီ မှာ ဂိုးပြတ် ခြေပြတ် ရှုံးနိမ့် ထားတဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကစားသမားတွေ ဆီ လာရောက် အားပေး ဖို့ စီစဉ် နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဂျပန် မှာ ကစားနေတဲ့ ဘာစီလိုနာ ကွင်းလယ်လူဟောင်း အန်ဒရေ အင်နီယေစတာ က ဘာစီလိုနာ နည်းပြသစ် ဖြစ်လာတဲ့ အသင်းဖော်ဟောင်း ဇာဗီ အတွက် ဝမ်းမြောက်ကြောင်း ပြောဆို ခဲ့သလို အောင်မြင်မှုတွေလည်း ရယူ နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဗြိတိန် တင်းနစ်မယ် အမ်မာ ရာဒူကနူ ကတော့ ထရန်ဆယ်လ်ဗေးနီးယား အိုးပင်း ပြိုင်ပွဲ ကနေ ရှုံးနိမ့် ထွက်ခွာ အပြီး မှာတော့ သူမ အနေနဲ့ တင်းနစ် ကိုသာ အဓိက နံပါတ် ၁ အဖြစ် ပြန်လည် အာရုံစိုက် လေ့ကျင့် သွားမယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
Previous Article ဆိုးလ်ရှားဟာ ကစားသမား နှစ်ဦးကို သတ်နေတယ်လို့ အကြီးအကျယ် ထိုးနှက် စွပ်စွဲလိုက်တဲ့ အိုဟားရား
Next Article အာဆင်နယ်အသင်း အားလုံးလည်း ရလဒ်ကောင်း၊Invincibleလည်း ဆက်မြဲခဲ့တာကြောင့် Gooner တို့ အတွက် ပျော်ရွှင်စရာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်